‘प्रसाद’ को ‘इन्डक्ल्याप’ मा निश्चलमाथि यस्तो आरोप, के छ त निश्चलको प्रतिक्रिया ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘प्रसाद’ को ‘इन्डक्ल्याप’ मा निश्चलमाथि यस्तो आरोप, के छ त निश्चलको प्रतिक्रिया ? (भिडियो)
दिनेश राउत निर्देशित तथा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ, अभिनेता द्वय विपिन कार्की र निश्चल बस्नेत स्टारर फिल्म ‘प्रसाद’ को सम्पूर्ण छायांकन सकिएको छ । यी तीन स्टारले पहिलो पटक एकसाथ स्क्रिन सेयर गरेकाले पनि यो फिल्म निकै प्रतिक्षित बनेको छ ।
चलचित्र पत्रकार संघ, नेपालका उपाध्यक्ष समेत रहेका निर्देशक सिटौलाले क्ल्याप ठोकेर फिल्मको छायांकन सकिएको उदघोष गरेका हुन् ।
‘नोभेम्बर रेन’, ‘क्लासिक’, ‘पर्व’ जस्ता फिल्मको निर्देशन गरिसकेका राउतले ‘प्रसाद’ लाई राम्रो बनाउन निकै मिहिनेत गरेको प्रष्ट पारे । उनले आउदो वर्षको मंसिर २१ गतेलाई फिल्म प्रदर्शनको मिति समेत घोषणा गरे ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता निश्चल वस्नेतले आफूले अभिनय गरेका अन्य फिल्मभन्दा ‘प्रसाद’ मा निभाएको भूमिका निकै फरक रहेको बताए । उनले भने, ‘छुट्टै खालको तर राम्रो फिल्म बनेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । आजसम्म एक्टरको रुपमा खेलेका फिल्मभन्दा यसमा मैले केही मिहिनते गरेर राम्रो काम निकाल्न सकेँ की भन्ने लागेको छ ।’
उनले ‘प्रसाद’ मा दर्शकले आफ्नो अभिनयमा म्याचुरिटी देख्न पाउने पनि बताए । यस्तै, अभिनेत्री नम्रताले यस फिल्ममा आफूले फरक भूमिका निर्वाहा गरेको बताइन् । यो फिल्ममा उनी गृहणी महिलाको भूमिकामा छिन् ।
सुवाष थापा इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा बनेको फिल्ममा लेखन भने सुशील पौडेलको रहेको छ । लाई राजेश श्रेष्ठको छायांकन रहेको फिल्ममा सुवाष भुसाल र कोशिष क्षेत्रीको संगीत रहेको छ ।
निःसन्तानका कारण पति र पत्निबीचमा आउने असमझदारी, अविश्वास तथा आफैंमा उत्पन्न एक मानसिक द्वन्द्वसँगै सामाजिक मुल्य–मान्यता विरुद्धको कथामा फिल्म निर्माण भएको छ ।